स्वास्थ्य विशेष विशेषज्ञसँगको अन्तर्वार्ता Archives - Medianp.com
स्वास्थ्य विशेष विशेषज्ञसँगको अन्तर्वार्ता	कसरी जोगिने पाठेघर मुखको क्यान्सरबाट ? (चिकित्सकसँगको भिडियो अन्तर्वार्ता)
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख २५, २०७४११:३१0 वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ गिसुपनिख प्रसिको
काठमाडौं । विभिन्न कारणले नेपाल यति नै क्यान्सर रोगी छन् भन्न सकिन्नँ । २००३ सालदेखि अस्पालको सम्पर्कका आएकाहरुको आधारमा मुलुकभर ३०–४० हजार क्यान्सर रोगका विरामी रहेका छन् । त्यसमध्य महिलामा	पुरा पढ्नुहोस
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: शनिबार, पुष १६, २०७३०९:३१0 वरिष्ठ छाला रोग विशेषज्ञ डा. नितेशराज पोखरेल, काठमाडौं । एलजी विभिन्न कारणले हुनेगर्छ । भान्सामा काम गर्दा, घडी, सिक्री, कपडालगायतका नयाँ बस्तु लगाउँदा एलर्जी हुनेगर्छ । खानपान तथा इन्फेक्सनका कारणले पनि हुन्छ । साथै कपालमा	पुरा पढ्नुहोस
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, पुष १२, २०७३१०:१२3 डा. प्रमोद अग्रवाल, काठमाडौं । कपाल झर्ने समस्या नेपालमा पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय ३० वर्ष उमेर पुगेका पुरुष तथा महिलाहरुमा कपाल झर्ने समस्या देखिन थालेको छ । कपाल झर्ने समस्यालाई एलोपेसिया भनिन्छ	पुरा पढ्नुहोस
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: आइतबार, मङि्सर १९, २०७३१२:०१0 प्रा.डा. रमेश कँडेल, काठमाडौं । मानव मस्तिष्कका विभिन्न कार्य क्षमता हुन्छन् । कुनै पनि विषयमा धारणा राख्न सक्ने, स्मरण शक्ति, मुल्याङ्कन तथा तर्क गर्न सक्ने लगायतका क्षमता मस्तिष्कका कार्यक्षमता भित्र पर्छन् । यिनैमध्ये स्मरणशक्ति गुमाउँदै	पुरा पढ्नुहोस
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: शनिबार, मङि्सर ०४, २०७३१४:२१0 डा. दिलजान मंसूर, काठमाडौं । आधुनिक जीवन शैलीसँग घुलमिल हुन थालिएसँगै आम मानिसमा उच्च रक्तचापको समस्या देखिन थालेको छ । उच्च रक्तचापको समस्या सबै उमेर समूहमा देखिने गर्छ । मुटुको काम शरीरका सबैभागमा रक्त पुर्याउनु	पुरा पढ्नुहोस
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कार्तिक १९, २०७३१३:२२0 मानिसले दैनिक रुपमा मुखबाट चाहिने र नचाहिने प्रकारका खानेकुराहरु खाइरेका हुन्छन्। मुखबाट खाने शरीरलाई अनावश्यक खैनी सूर्ति, जाँड रक्सी, चुरोट लगायतका निकोटिनले मानिसको स्वस्थ शरीरलाई विस्तारै ध्वस्त पारिरहेका हुन्छन्। यही कारण मानिस विस्तारै क्यानसरको सिकार	पुरा पढ्नुहोस
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक ०६, २०७३१५:५३0 प्राय पुरुषमा देखिने रोग प्रोस्टेड ग्रन्थीबारे मिडियाएनपीकर्मी डा. दिलजान मंसूरले युरोलोजिस्ट डा.अरुणदेव भट्टसँग गरेको भिडियो संवादमा आधारित।
मानिस जातिमा करीब ५० वटा भन्दा बढी ग्रन्थी हुने गर्दछ। ती मध्ये एउटा हो प्रोस्टेड ग्रन्थी जुन हरेक पुरुषहरुमा	पुरा पढ्नुहोस
स्टाफ नर्सका कुरा : सिस्टर, हाम्रो बिरामीको अवस्था कस्तो छ ?
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १३, २०७३१०:११0 डा. दिनजान मंसूर बिरामी भेट्न आउनेले नर्सलाई सोध्छन्, ‘सिस्टर, हाम्रो बिरामीको अवस्था कस्तो छ ?’ यसैले देखाउँछ बिरामीको उपचारमा नर्सको भूमिका निकै संवेदनशील हुन्छ । मिडियाएनपीले विशेषज्ञ डक्टरका साथ विशेष रोगबारे कुरा गर्दै आएको छ ।	पुरा पढ्नुहोस
जन्डिस धेरैलाई भएको देख्छौँ, के तपाईंलाई सर्जिकल जन्डिसबारे थाहा छ ?
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, साउन ३२, २०७३०९:३३0 रगतमा बिलिरुबिन भन्ने तत्व बनिरहेको हुन्छ । त्यो तत्वलाई रगतले कलेजोमा लैजान्छ र कलेजोले नलीहरूबाट आन्द्रा लगेर त्यसलाई बाहिर फ्याँक्ने गर्छ । कुनै पनि कारणले शरीरमा बिलिरुबिनको मात्रा बढी हुन पुग्यो भने त्यो आँखा र	पुरा पढ्नुहोस
थाइरोइडको रोग के हो, उपचारबारे थाइरोइड रोग विशेषज्ञ डा. डिनाको सल्लाह
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, साउन २५, २०७३१२:४२4 थाइरोइड ग्रन्थी सबैमा हुन्छ । त्यो ग्रन्थीमा समस्या आउनु नै थाइरोइडको रोग हो । ग्रन्थीले काम गर्न छोड्नु र ग्रन्थी सुन्निएर ठूलो हुनु वा गलगाँड देखिनुलाई नै थाइरोइडको रोग भनिन्छ ।
थाइरोडको रोगबारे थाइरोइडरोग विशेषज्ञ डा.	पुरा पढ्नुहोस